Iphulo elingeelwimi elijoliswe kubafundi abasuka kumazwe angaphandle | US Taalsentrum
Op 17/09/2019 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas
Abafundi abasuka kumazwe angaphandle abanomnqweno wokuphucula ulwazi lwabo lolwimi lwesiNgesi banethuba lokubhalisa kwiNkqubo eNzulu yesiNgesi yeZiko leeLwimi (IEP). Le nkqubo ikhuthaza abafundi abakumanqanaba ohlukeneyo ngaphakathi kwi-IEP ukuba badibane ngooLwezihlanu bedibanela iwekhshophu yeelwimi ejoliswe ekubeni banxibelelane bethetha ulwimi lwesiNgesi.
NgoLwesihlanu, owama-23 kweyeThupha (Agasti), abafundi bethu bakaloku nje be-IEP abasuka kumazwe angaphandle baye bathabatha uhambo kwiGadi yeZityalo neZilwanyana yase-SU bekhokelwe yinkokeli enolwazi kakhulu kwaye enikisa umdla, uSandiswa Kula. Uye wabalisela abafundi amabalana amnanjana ebanika nolwazi malunga neentlobo ngeentlobo zezityalo, izinambuzane, izilwanyana kunye neentaka ezinokufumaneka kwezi gadi. Abafundi baye batyelela izindlu zeglasi eziliqela, amachibi ezityalo ezikhula phantsi kwamanzi, ihlathi elaziwa njengeBonsai, amatyholo ezityalo zohlobo lweProtiya kunye negadi yezityalo ezinokusetyenziswa nje ngeziqholo, babuza imibuzo baze bathelekisa izityalo nezilwanyana abazibonileyo kunye nezo zakumazwe abo.
Ibhloko ye-IEP iquka iiyure ezingama-20 zokuhlohlwa kolwimi lwesiNgesi ukususela ngentsimbi ye-9:00 ukuya kweye-13:00, ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, iiveki ezi-8. Abahlohli abafundele ukufundisa ulwimi lwesiNgesi njengolwimi lwangaphandle bafundisa besebenzisa iintlobo ngeentlobo zeencwadi zezifundo kunye nemithombo yoncedo elungiselelwe oko ukuze baphucule izakhono zabafundi zokufunda, ukubhala, ukuthetha kunye nokumamela. Ngaphezu koko kunikwa ingqwalasela kwigrama, ukubizwa kwamagama kunye nokwandiswa kolwazi lwamagama esiNgesi. Abafaki-zicelo abatsha babhaliswa uvavanyo lokungeniswa kwi-IEP, vavanyo olo luncedisa ekubeni umfundi ngamnye afakwe kwinqanaba le-IEP elimfaneleyo.
Imihla yeebhloko ezilandelayo ihamba ngolu hlobo lulandelayo:
2019: 14 kweyeDwarha (Okthobha) ukuya kowe-6 kweyoMnga (Disemba)
2020: 3 kweyoMdumba (Febhruwari) ukuya kowama-27 kweyoKwindla (Matshi), owe-6 kwekaTshazimpuzi (Epreli) ukuya kowama-29 kwekaCanzibe (Meyi), owe-8 kweyeSilimela (Juni) ukuya kowama-31 kweyeKhala (Julayi), owe-11 kweyeThupha (Agasti) ukuya kowe-2 kweyeDwarha (Okthobha), owe-12 kweyeDwarha (Okthobha) ukuya kowe-4 kweyoMnga (Disemba).
Ukuba unomdla okanye ungathanda ukufumana ulwazi oluthe vetshe, qhagamshelana nomququzeleli we-IEP kwiZiko leeLwimi, uShannon Bishop.
US TaalsentrumArtikels in Xhosa Dialogos Jongste nuus Ons taleIphulo elingeelwimi elijoliswe kubafundi abasuka kumazwe angaphandle